သောကျရသေနျ့တှကေို ရနှေေးကြိုခကျြသောကျရငျ ကငျဆာဖွဈစနေိုငျလား……..? – Youth Bar
သောကျရသေနျ့တှကေို ရနှေေးကြိုခကျြသောကျရငျ ကငျဆာဖွဈစနေိုငျလား……..?
အခုတဈလော Facebook လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ သောကျရသေနျ့ကို ရနှေေးကြိုခကျြရာမှာသုံးသော၊ထမငျးဟငျးခကျြရာမှာသုံးသော သူတှကေို ရုတျရုတျသဲသဲ ဖွဈသှားစခေဲ့တဲ့ ပိုဈ့တဈခု အကွောငျး လကျလှမျးမှီသလောကျလေး ရှငျးပွပါရစေ။
အဆိုပါ ပိုဈ့ခေါငျးစဉျကတော့ သောကျရသေနျ့တှကေို အပူပေးလိုကျတဲ့အခါ ကငျဆာဖွဈစနေိုငျတယျ ဆိုတာပါပဲ။
ပြံ့နှံ့နတေဲ့ပို့ဈမှာ ပါဝငျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ဦးစှာပွောပွရလြှငျ –
” ရသေနျ့ကို ရနှေေးကြိုသောကျတာ မဟုတျပဲ နပေူထဲခထြားရငျတောငျကငျဆာဖွဈပါတယျ။ ရသေနျ့ဖွဈဖို့ကလိုရငျးဆေးခပျရပါတယျ။
ရသေနျ့ထဲမှာထညျ့ထားတဲ့ ကလိုရငျးဓာတျက အပူနဲ့ထိတှတေဲ့အခါ ကလိုရိုဖောငျးဓာတျအဖွဈပွောငျးလဲသှားပွီး ကွာရှညျအပူပေးသုံးစှဲလာတဲ့အခါ
မအီမသာဖွဈခွငျး ခေါငျးကိုကျခွငျး ပြို့အနျခွငျး အမညျမဖျောနိုငျတဲ့ရောဂါတှဖွေဈလာခွငျးမြားဖွဈပျေါလာပွီး ကငျဆာဘကျကိုနှယျလာနိုငျတာမြိုးဖွဈနိုငျခမြေားပါတယျ။
pH 7ကို ထပျပွီးသနျ့စငျလြှငျ Alkali ရသေနျ့ဖွဈသှားမယျ၊ Alkali ရသေနျ့က ကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုပွီး အဆငျပွတေယျ၊Alkaline အထိလညျး ထပျပွောငျးလဲလို့ ရတယျ။ ”
ထိုအကွောငျးအရာကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာလညျး ပွနျလညျမြှဝသေူမြားပွားလှနျးသညျက တဈကွောငျး မှားယှငျးသော ယူဆခကျြတှကေို လူအမြား အမှနျလို့ ကောကျခကျြခမြိမှာစိုးသောကွောငျ့
တဈကွောငျး စတဲ့ အကွောငျးမြားကွောငျ့သာ လကျလှမျးမှီသလောကျ Knowledgeမြားကို Shareပေးခွငျးသာ ဖွဈပါတယျ။မညျသူတဈဦးတဈယောကျကိုမှ ရညျညှနျးပွီး ထိခိုကျလိုစိတျ၊ပကျြစီးစလေိုစိတျနဲ့ ရေးတာ မဟုတျကွောငျး ဦးစှာပွောပါရစေ။
အကွမျးအားဖွငျ့ဆိုရသျော သောကျရသေနျ့ဆိုတာ သာမာနျရေ(တှငျးရေ၊ကနျရေ၊မိုးရေ၊ခြောငျးရေ၊အဝီစိရေ)စတဲ့ ထုတျလုပျမှုကုနျကွမျးရဲ့ အရညျအသှေးကို စဈဆေးပွီး
အနညျနှငျ့ပိုးမှားတှကေို စကျကိရိယာအဆငျ့ဆငျ့နှငျ့ စဈထုတျပေးရုံ သာမက အဆိုပါရနှေငျ့အတူ ပြျောဝငျနတေဲ့📝 ဓာတုပစ်စညျးမြားကိုလညျး လိုအပျခကျြထကျပိုပွီး မပါဝငျနိုငျစဖေို့ စနဈတကြ လိုတိုး/ပိုလြော့ လုပျထားသောရကေို ဆိုလိုပါတယျ။
ပြုံ့နှံ့နတေဲ့ ပိုဈ့မှာ ပါဝငျတဲ့ အခကျြတှကေို ပွနျပွီး ရှငျးပွရလြှငျ –
(1) သောကျရသေနျ့ဘူးတှကေို နပေူထဲထားရငျ ဘာ့ကွောငျ့ ကငျဆာဖွဈစနေိုငျတာလဲ?
တကယျတော့ ကြှနျတျောမကွာခဏပွောဖူးသလိုပဲ ရရေဲ့ အထူးခွားဆုံးဂုဏျသတ်တိက သူကိုယျတိုငျ အဆိပျအတောကျတှကေို မဖွဈပျေါစနေိုငျပါဘူး။
ထို့အတှကျ သောကျရသေနျ့ဘူးတှကေို နပေူထဲ ကွာရှညျထားရငျ(သို့မဟုတျ) နရေောငျခွညျနှငျ့ တိုကျရိုကျထိတှသေ့ောနရောမှာထားရငျတောငျ သောကျရသေနျ့က ကိုယျတိုငျ ဓာတုဓာတျပွုမှု၊ ညဈညမျးမှုကို မဖွဈစနေိုငျပါဘူး
။သို့ပမေယျ့ သောကျရသေနျ့ကို ထညျ့သှငျးဖွနျ့ဖွူးရောငျးခနြတေဲ့ ပလပျစတဈ ရသေနျ့ဘူးကတော့ နရေောငျခွညျနဲ့ အခြိနျအတျောကွာ တိုကျရိုကျထိတှတေဲ့အခါ(သို့မဟုတျ) နပေူကွီးမှာ သောကျရသေနျ့ဘူးတှကေို
အမိုးအကာမပါပဲ လှညျ့လညျရောငျးခတြဲ့အခါမှာ Bisphenol A (BPA)လို့ချေါတဲ့ အဆိပျငှထှေ့ကျလာစနေိုငျပွီး အဆိုပါအဆိပျမှ ရနှေငျ့အတူရောနှောပြျောဝငျသှားသောအခါ
အဆိုပါရကေ ဓာတုဓာတျပွုမှုတှေ ဖွဈပျေါစနေိုငျပွီး သောကျသုံးမိပါက ကငျဆာကဲ့သို့ ဆိုးဝါးသောရောဂါမြားကို ခံစားရစနေိုငျပါတယျ။
– ထို့အတှကျ အဖွကေတော့ နရေောငျခွညျနှငျ့တိုကျရိုကျထိတှမှေု့အနညျးဆုံးဖွဈသော သောကျရသေနျ့ကို ရနှေေးကြိုသောကျတဲ့အခါမှာတော့ သငျ့ခန်တာကိုယျအတှကျ မညျသညျ့ဆိုးကြိုးမှ မဖွဈပျေါစနေိုငျပါဘူး။
(2) သောကျရသေနျ့အမှတျတံဆိပျတှကေ ရကေို သနျ့စငျဖို့အတှကျ Chlorine ကို အသုံးပွုကွလား?
ရကေို စနဈတကြ သနျ့စငျပွီး ထုတျလုပျဖွနျ့ခြီရောငျးခပြေးနတေဲ့ သောကျရသေနျ့အမှတျတံဆိပျမှနျသမြှ ရသေနျ့ဘူးခှံတှပေျေါမှာ “Free Chlorine” ဆိုပွီး အပါမခံပါဘူး။
ပါခဲ့ရငျလညျး အစားအသောကျနှငျ့ဆေးဝါးကှပျကဲမှု ဦးစီးဌာန (FDA)ကလညျး ထောကျခံခကျြ ထုတျပေးမှာ မဟုတျပါဘူး။ တကယျတော့ Chlorineကို ဘယျနရောတှမှောအဓိကသုံးလဲဆိုရငျ
ရကေူးကနျတှေ၊မွို့ပွရပေေးဝရေေးစီမံကိနျးတှေ၊အရေးပျေါသောကျရသေနျ့ လိုအပျလကျြရှိသော အခွအေနမြေိုးတှေ စတာတှမှော ကနျအတှငျး ပိုးမှားပေါကျဖှားမှုမရှိစဖေို့အတှကျ Free Chlorineကို doseအနညျးငယျထညျ့ပေးထားတတျကွပါတယျ။
– ထို့အတှကျ အဖွကေတော့ သောကျရသေနျ့ အမှတျတံဆိပျတှမှော Chlorineကို အသုံးပွုထားခွငျးမရှိပါဘူး။
(3) Alkali နဲ့ Alkaline ရေ ဆိုတာ ဘာလဲ?
အပွတျသားဆုံးပွောရမယျဆိုရငျ Alkali ဖွဈပွီးရငျ Alkaline ဖွဈတယျဆိုတာ လုံးဝကို သကျဆိုငျခွငျး မရှိပါဘူး။Alkali ဆိုတာ( Noun Form )ပါ၊Alkaline ဆိုတ
(Adjective Form)ပါ။သောကျရသေနျ့ ပညာအရ သငျ့တျောအောငျဘာသာပွနျရမယျဆိုလြှငျ “Alkali” ကို “အဖနျဓာတျရှိသော သတ်တု” / “Alkaline” ဆိုတာ “အဖနျဓာတျပါဝငျသော” အဲ့လိုပွနျရမှာပါပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထို့အတှကျအဖွကေတော့ Alkali ဖွဈပွီး Alkaline ဖွဈတယျဆိုတာ လုံးဝ(လုံးဝ)ကို မသကျဆိုငျပါဘူး။
Dr Sai Aung ThantZin
သောက်ရေသန့်တွေကို ရေနွေးကျိုချက်သောက်ရင် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်လား……..?
အခုတစ်လော Facebook လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ သောက်ရေသန့်ကို ရေနွေးကျိုချက်ရာမှာသုံးသော၊ထမင်းဟင်းချက်ရာမှာသုံးသော သူတွေကို ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ ပိုစ့်တစ်ခု အကြောင်း လက်လှမ်းမှီသလောက်လေး ရှင်းပြပါရစေ။
အဆိုပါ ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ သောက်ရေသန့်တွေကို အပူပေးလိုက်တဲ့အခါ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပို့စ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဦးစွာပြောပြရလျှင် –
” ရေသန့်ကို ရေနွေးကျိုသောက်တာ မဟုတ်ပဲ နေပူထဲချထားရင်တောင်ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ ရေသန့်ဖြစ်ဖို့ကလိုရင်းဆေးခပ်ရပါတယ်။
ရေသန့်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ကလိုရင်းဓာတ်က အပူနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ ကလိုရိုဖောင်းဓာတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး ကြာရှည်အပူပေးသုံးစွဲလာတဲ့အခါ
မအီမသာဖြစ်ခြင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း ပျို့အန်ခြင်း အမည်မဖော်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကင်ဆာဘက်ကိုနွယ်လာနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
pH 7ကို ထပ်ပြီးသန့်စင်လျှင် Alkali ရေသန့်ဖြစ်သွားမယ်၊ Alkali ရေသန့်က ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်၊Alkaline အထိလည်း ထပ်ပြောင်းလဲလို့ ရတယ်။ ”
ထိုအကြောင်းအရာကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာလည်း ပြန်လည်မျှဝေသူများပြားလွန်းသည်က တစ်ကြောင်း မှားယွင်းသော ယူဆချက်တွေကို လူအများ အမှန်လို့ ကောက်ချက်ချမိမှာစိုးသောကြောင့်
တစ်ကြောင်း စတဲ့ အကြောင်းများကြောင့်သာ လက်လှမ်းမှီသလောက် Knowledgeများကို Shareပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ရည်ညွှန်းပြီး ထိခိုက်လိုစိတ်၊ပျက်စီးစေလိုစိတ်နဲ့ ရေးတာ မဟုတ်ကြောင်း ဦးစွာပြောပါရစေ။
အကြမ်းအားဖြင့်ဆိုရသော် သောက်ရေသန့်ဆိုတာ သာမာန်ရေ(တွင်းရေ၊ကန်ရေ၊မိုးရေ၊ချောင်းရေ၊အဝီစိရေ)စတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကြမ်းရဲ့ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပြီး
အနည်နှင့်ပိုးမွှားတွေကို စက်ကိရိယာအဆင့်ဆင့်နှင့် စစ်ထုတ်ပေးရုံ သာမက အဆိုပါရေနှင့်အတူ ပျော်ဝင်နေတဲ့📝 ဓာတုပစ္စည်းများကိုလည်း လိုအပ်ချက်ထက်ပိုပြီး မပါဝင်နိုင်စေဖို့ စနစ်တကျ လိုတိုး/ပိုလျော့ လုပ်ထားသောရေကို ဆိုလိုပါတယ်။
ပျုံ့နှံ့နေတဲ့ ပိုစ့်မှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်တွေကို ပြန်ပြီး ရှင်းပြရလျှင် –
(1) သောက်ရေသန့်ဘူးတွေကို နေပူထဲထားရင် ဘာ့ကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တာလဲ?
တကယ်တော့ ကျွန်တော်မကြာခဏပြောဖူးသလိုပဲ ရေရဲ့ အထူးခြားဆုံးဂုဏ်သတ္တိက သူကိုယ်တိုင် အဆိပ်အတောက်တွေကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါဘူး။
ထို့အတွက် သောက်ရေသန့်ဘူးတွေကို နေပူထဲ ကြာရှည်ထားရင်(သို့မဟုတ်) နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သောနေရာမှာထားရင်တောင် သောက်ရေသန့်က ကိုယ်တိုင် ဓာတုဓာတ်ပြုမှု၊ ညစ်ညမ်းမှုကို မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး
။သို့ပေမယ့် သောက်ရေသန့်ကို ထည့်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ ပလပ်စတစ် ရေသန့်ဘူးကတော့ နေရောင်ခြည်နဲ့ အချိန်အတော်ကြာ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့အခါ(သို့မဟုတ်) နေပူကြီးမှာ သောက်ရေသန့်ဘူးတွေကို
အမိုးအကာမပါပဲ လှည့်လည်ရောင်းချတဲ့အခါမှာ Bisphenol A (BPA)လို့ခေါ်တဲ့ အဆိပ်ငွေ့ထွက်လာစေနိုင်ပြီး အဆိုပါအဆိပ်မှ ရေနှင့်အတူရောနှောပျော်ဝင်သွားသောအခါ
အဆိုပါရေက ဓာတုဓာတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး သောက်သုံးမိပါက ကင်ဆာကဲ့သို့ ဆိုးဝါးသောရောဂါများကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
– ထို့အတွက် အဖြေကတော့ နေရောင်ခြည်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သော သောက်ရေသန့်ကို ရေနွေးကျိုသောက်တဲ့အခါမှာတော့ သင့်ခန္တာကိုယ်အတွက် မည်သည့်ဆိုးကျိုးမှ မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါဘူး။
(2) သောက်ရေသန့်အမှတ်တံဆိပ်တွေက ရေကို သန့်စင်ဖို့အတွက် Chlorine ကို အသုံးပြုကြလား?
ရေကို စနစ်တကျ သန့်စင်ပြီး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချပေးနေတဲ့ သောက်ရေသန့်အမှတ်တံဆိပ်မှန်သမျှ ရေသန့်ဘူးခွံတွေပေါ်မှာ “Free Chlorine” ဆိုပြီး အပါမခံပါဘူး။
ပါခဲ့ရင်လည်း အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာန (FDA)ကလည်း ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ Chlorineကို ဘယ်နေရာတွေမှာအဓိကသုံးလဲဆိုရင်
ရေကူးကန်တွေ၊မြို့ပြရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းတွေ၊အရေးပေါ်သောက်ရေသန့် လိုအပ်လျက်ရှိသော အခြေအနေမျိုးတွေ စတာတွေမှာ ကန်အတွင်း ပိုးမွှားပေါက်ဖွားမှုမရှိစေဖို့အတွက် Free Chlorineကို doseအနည်းငယ်ထည့်ပေးထားတတ်ကြပါတယ်။
– ထို့အတွက် အဖြေကတော့ သောက်ရေသန့် အမှတ်တံဆိပ်တွေမှာ Chlorineကို အသုံးပြုထားခြင်းမရှိပါဘူး။
(3) Alkali နဲ့ Alkaline ရေ ဆိုတာ ဘာလဲ?
အပြတ်သားဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Alkali ဖြစ်ပြီးရင် Alkaline ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝကို သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။Alkali ဆိုတာ( Noun Form )ပါ၊Alkaline ဆိုတ
(Adjective Form)ပါ။သောက်ရေသန့် ပညာအရ သင့်တော်အောင်ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုလျှင် “Alkali” ကို “အဖန်ဓာတ်ရှိသော သတ္တု” / “Alkaline” ဆိုတာ “အဖန်ဓာတ်ပါဝင်သော” အဲ့လိုပြန်ရမှာပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတွက်အဖြေကတော့ Alkali ဖြစ်ပြီး Alkaline ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ(လုံးဝ)ကို မသက်ဆိုင်ပါဘူး။